"Koa satria Isika manana Mpisoronabe lehibe, Izay lasa namaky ny lanitra, dia Jesosy, Zanak’Andriamanitra, aoka isika hihazona ilay efa nekentsika." Hebreo 4:14
"Fa notononin’Andriamanitra hoe Mpisoronabe "araka ny fanaon’ i Melkizedeka."" Hebreo 5:10
Mpisoronabe tanteraka (4:14-16). Tamin’ny nahatongavan’i Jesosy Kristy ho nofo dia nizara ny fahalementsika sy ny aretintsika Izy, saingy tsy mba nanota (4:15). Izay no nanandratana Azy ho amin’ny toerana ambony ary afaka, tsy ny mahazo antsika ihany, fa indrindra koa, ny mamonjy antsika amin’ny “andro mahory” (16). Nahoana ary isika no hihafihafy tsy hanatona ny seza fiandrianan’ny fahasoavany?
Fisoronana amin’ny fotoana mandalo (5:1-4). Amin’ny maha-olombelona azy, dia manana ny fahalemeny ireo mpisorona taranak’i Arona. Noho izany dia manao fanatitra ho an’ny tenany aloha izy vao afaka manao izany indray ho an’ny vahoaka. Ireny ràn’ny biby ireny anefa dia tsy afaka mamafa mandrakizay ny fahotàna. Averina matetika ny fanaterana fanatitra. Manaraka izany, ny mpisorona dia olombelona mety maty, koa tsy maintsy soloina hatrany izy ireny.
Fisoronana mandrakizay (5-10). Manambara ny fisoronan’ny Zanany Andriamanitra “araka ny fanaon’i Melkizedeka”, izay tandindon’i Kristy (10, jereo koa Genesisy 14:18, Hebreo 7:3). Manamafy izany fa lehibe lavitra noho ny an’i Arona ny fisoronan’i Kristy. Mandrakizay izany fisoronana izany, fa tsy mandalo. Ny ràny no natolotr’i Kristy fa tsy ran’ny biby. Namaky ny lanitra Kristy ary nidina tonga olona, tena olona, tena Andriamanitra ihany koa (4:14), nijaly tao amin’ny nofony, nitaraina tamin-dranomaso, nianatra fankatoavana na dia Zanaka aza. Izany rehetra izany no nahatonga Azy, ho loharanon’ny famonjena mandrakizay ho antsika (9) satria tsara lavitra ny fisoronana nataony. Haleloia!
Fahatokiana: Afaka miaraka ory sy mijaly aminao ny Tompo satria Izy efa nijaly sy nampahoriana koa.